Waa maxay Shahaadada AWS? Liisaska Koorsooyinka Tababarka AWS | Tababarka ITS
Liiska Fasallada AWS Tababarka iyo Shahaadooyinka
AWS - Dhismaha Solutions:
AWS Bixinta Shahaadooyinka Aasaasiga ah & Koorsooyinka Tababarka ee Solutions Architects, Maamulayaasha SysOps & Developers. Solutions Technologies Innovative waxay bixisaa shahaadooyin heer-xirfadeed oo loogu talagalay Qalabka Solutions Architects & Engineers DevOps oo ka wakiil ah AWS.
AWS Tusaalooyinka Muhiimka ah:
Koorsada AWS Business Essentials waxaa loogu talagalay inay kaa caawiso inaad si fiican u fahamto daruuraha AWS, iyada oo hadafkaagu yahay inaad si fiican u diyaargarowdid in la baaro laguna hormariyo istaraatiijiyad doorashada xalka. Koorasku wuxuu ka hadlaa aasaasiga ah AWS iyo khibradaha daruuriga ah ee ganacsigaaga, oo ay ku jiraan amniga, iyo faa'iidooyinka la xiriira lacagta. Waxay soo bandhigaysaa nidaamyo ku saabsan qoondaynta cawska ah, waxay wax ka qabataa isbeddelka IT-ga iyo qaybaha, iyo dib u eegista sida adeegyada AWS ay wax uga beddeli karaan maaraynta kharashka IT-ga. Tababarka #AWS
Imtixaanka AWS Certified Solutions - Imtixaanka Associate waxaa loogu talagalay dadka khibrad u leh qorsheynta codsiyada iyo nidaamyada qaybta AWS. Fikradaha imtixaanka ee lagaa rabo inaad fahamto imtixaankan waxaa ka mid ah: Diyaarinta iyo dejinta qalabka la qabadsiin karo, si aad ah loo gaari karo, iyo nidaamka cadaadiska ee AWS. #AWS Shahaadada
Aruurinta AWS waxay daboolaysaa aasaaska dhismaha IT-da ee AWS. Koorsada waxaa loogu talagalay inay muujiso qorshe-dajiyeyaasha sidii loo horumarin lahaa isticmaalka AWS Cloud iyadoo la fahmayo adeegyada AWS iyo sida adeegyadani u habboon yihiin hababka daruuriga ah. Koorsadani waxay muujinaysaa hababka ugu fiican ee AWS iyo tusaalooyinka qorshaha ee loogu talagalay inay ka caawiyaan fahamka inay si fiican u tixgeliyaan habka loo dhisi karo habka IT-da ee AWS. Baaritaanada guud ee ku jira maadada kooraska sida qaar ka mid ah macaamiisha AWS waxay ku qeexeen kaabayaashooda iyo farsamooyinka iyo adeegyada ay qabteen. #AWS Koorsooyinka Tababarka